Dhageyso: Wareysi la xiriira xulashada abuurka iyo saameynta uu ku leeyahay tacbashada fiican. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Dhageyso: Wareysi la xiriira xulashada abuurka iyo saameynta uu ku leeyahay tacbashada fiican.
Dhageyso: Wareysi la xiriira xulashada abuurka iyo saameynta uu ku leeyahay tacbashada fiican.
Posted by: radio himilo March 13, 2017
Muqdisho – Iniinaha la beero ee salka u ah abuurka waa tallaabta koobaad ee ka bilaabata qorshaha wax beerista – waxyar kadib marka la hubsado nuuca carrasanta ah ee ku habboon beerashada. Waxa jira waxyaalo badan oo muhiim ah in qofka wax beeraya uu ka fikiro mar iyo marar badan. Xulashada jaadka abuur ee mudan ee in lagu foojignaado waa dariiqa koobaad ee lagu odoroso natiijada uu ku danbeynayo. Gefna ma ahan in la yiraahdo badi fashilka ku yimaada beeraha qaar wuxuu dib ugu noqonayaa awalkii hore ee xulashada abuurkii ku habboonaa.
Fahamka ah goorta lalimayo beeraha iyo gurashadeeda, waa mid ay u wda siman yihiin badi beeraleyda. Hayeeshe sida loo xusho ama la iskugu beego ciidda iyo abuurka is-qaadan kara waa mowduuc mar kasta u furan garasho dheeraad si loo xaqiiqsado in juhdiga iyo dadaalka ku baxa beeraheenna aysan u noqon bar-kuma-taal.
Wax-beerashadu muddaba waxay soo aheyd mid sameyneysa horumarro kala duwan oo ku xadaysan xilligii ay taagneyd. Waxaana ay aheyd mid soo koreysa marba marka kasii danbeysa – u eegis la’aan gacan dowladeed sida waqtiga xukuumadii Kacaanka oo beeraleyda ka kaalmeyn jirtay u sameynta cilmi-baarisyo iyo sahan lagu xoojinayo tayada iyo aqoonta ay u yeelan karaan iyo sidoo kale ugu deeqista agab iyo adeegyo loogu sahlayo beerashada.
Maanta kaalintaas waxay usoo muuqaneysaa waji kale. Waxaana jira dadaallo ay aqoon-yahannadeennu mar kasta ku bixiyaan sida beeraleyda loogu iftiimin karo xulashada habboon ee abuurka; iyada oo taasi loo marayo kulliyadaha beeraha.
Hadaba si aan u sameyno kaabad isku xiri karta aqoon-yahankeenna iyo beeraleydeenna, waxaynu xog dheeraad oo ku saabsan xulashada abuurka iyo saameynta uu ku leeyahay tacbashada fiican kala sheekeysaneynaa ustaad Abdikadir Nuur Hadaafow – oo ah bare dhiga Cilmiga Beeraha.
Wariyaheenna Axmed Maxamed Maxamud Haadi ayuu u warramay.
Previous: Dhaqaatiir Muslimiin ah oo daweyn lacag la’aan siiya dadka liita ee California
Next: Arsenal oo xaqiijisay ciyaar kale oo ay saaxiibtinimo ku dheeli doonto Bayern Munich